Iwo akanakisa ekunyorera ekunyora pane yako Mac | Ndinobva mac
Iwo akanakisa ekunyorera ekunyora pane yako Mac
Chimwe chezviitiko izvo vashandisi veMac vanoita zvakanyanya kunyora. Iyo inogona kuve manotsi uye mapepa ezvidzidzo zvedu, mishumo yebasa redu, zvinyorwa zveblog redu kana mapeji atinoburitsa zvinyorwa nguva zhinji kana iro bhuku iro vazhinji vanorota kusvika muchikamu che "super sales". Asi chero zvatinonyora, tinonyora, uye tinonyora zvakawanda. Neichi chikonzero nhasi ini ndiri kuzokuratidza a kusarudzwa kweanogona kuve mafomu akanakisa ekunyora paMac yako. Uye ini ndinoti "ndaigona" nekuti, mushure mezvose, iyo yakanakisa app haisi imwe kunze kweiyo inokwanisa kugona kuchinjira kune izvo zvido zvemumwe nemumwe mushandisi, uye kwete iye wandinoda kwazvo.
Asi zvakare, kutanga kubva pakufungidzira kuti ruzhinji rwevashandisi veMac vari zvakare iPad uye / kana vashandisi ve iPhone, isu tichaenda kunosanganisira chete iwo maapplication ekunyora ayo zvakare ane yavo vhezheni vhezheni yeIOS Nekuti chinhu chakajairika chevanyori vazhinji ndechekuti chero nguva, chero chinhu chinhu chakanaka kana girobhu rekugadzira richienderera. Saka ngatitangei.
3 IA Munyori
Hazvirevi kuti "mbudzi inodhonzera kugomo", zvinongova zvekuti kana tikataura nezve mafomu ekunyorera paMac, chinhu chiri pachena chinoratidzika kunge chinotangira neicho Apple pachayo inotipa mahara, Pages.
Ini handisi kuzoenda mune yakadzama nhoroondo nezvechimwe nechimwe chikumbiro, kana isu hatingazopedze, asi pachangu ini ndirikutokuudza kuti Mapeji haafarire. Mukuda kwako zvakakosha kunongedza yako kusangana kukuru uye kuwiriranisa nezvimwe zvese zvishandiso kuburikidza neICloud (unogona kutanga kunyora paMac yako, enderera pa iPhone yako paunenge wakamirira bhazi, uye kupedzisa kubva paPadad yako uine kofi), uye iyo ine yakapusa uye nyore kushandisa interface, Inokodzera vatsva uye kuti panguva imwechete, inopa akawanda akawanda maficha maficha evashandisi vepamberi. Uye isu hatifanire kukanganwa kuti iwe unogona kupinza uye kutumira kunze zvese zviri muMapeji fomati pachayo uye muIzwi, PDF uye ePub. Sezvo iri yemahara, zvakanakisa kuti uzviongorore uye uzvikoshese pachako.
Ngatienderere mberi nezviri pachena, Shoko. Usakande matombo kwandiri asi, pachezvangu, ini ndinoda iyo interface yeIzwi kupfuura maPeji, zvisinei, ine mabasa akawanda pamberi payo zvekuti dzimwe nguva unoda masekondi mashoma kuti uzive kwaunofanira kubata. Inoenderana chaizvo pakati pemidziyo kuburikidza neakaundi yako yeMicrosoft uye, hatigone kuiramba, yakanyatso kukwana uye inonyanya kushandiswa pasi rese.
Munyori anoverengera zvake yakanyanya kushomeka mushandisi interface yakagadzirirwa kupa typewriter-maitiro kunzwa. Paunenge uchinyora hapana chinhu pachiratidziri, kunze kwesheet nemazwi ako.
Plain mavara uye mafaera akachengetwa muICloud nemamwe maficha, pamwe ne Markdown rutsigiro. Asi mabasa uye mabhenefiti eIA Munyori akawanda zvimwe, kunyanya kana iwe uri mumwe wevaya vanokanganiswa zviri nyore.
IA Munyori29,99 €
Scrivener iko kunyorera kwekunyora paMac inodiwa yevanyori vazhinji. Zvakanakira zvaro zvikuru zvinosanganisira kunyora pasina zvinokanganisa muIA Writer modhi, yakanyanya mwero yekugadzirisa (kumashure uye kumberi kumberi, kumahombekombe, mhando yekutsikisa ... "tarisa uye zvakawanda, zvimwe zvinhu zvakawanda uye mashandiro akaita kuti ive yeakanyanya kunaka mapurogiramu ekunyora.
Uye ini ndinosiya wandinoda wekupedzisira, Ulysses, Anwendung seyakanaka kwazvo sezvo iri kushanda, zvese paMac, iPad kana iPhone, uyezve imwe yeanodhura (€ 44,99 yeMac uye € 24,99 ye iPhone / iPad).
Nezve kuravira kwangu, Ulysses ndicho chakanakisa app kune avo vanonyora kazhinji online, asi zvakare kune avo vanoita mamwe mapurojekiti anodakadza sekunyora bhuku.
Su interface iri nyore kwazvo uye isina zvinokanganisa, Kukutendera iwe kuti utarise pakunyora, uye hapana chimwe chinhu. Ese mameseji ako akawiriraniswa kuburikidza neICloud, pasina zvinetswa, zvinoenderana neMarkdown uye iwe unogona kutumira kunze muIzwi, PDF, epub fomati kana kushambadza zvakananga pane yako WordPress blog kana paMedium.
Ehezve kune mamwe akawanda mafomu ekunyora paMac yako, ichi chingori muenzaniso, asi ndechipi chaunofarira uye nei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Iwo akanakisa ekunyorera ekunyora pane yako Mac
Ini handibvume, hautaure LibreOffice nekuti haina kubhadharwa? Enda izvozvi !!!
Izvo zviri nyore pane yako yakakanganisa Rotelo fungidziro: Ini handitaure nezve LibreOffice nekuti ini handina kumboishandisa uye saka handisi kuzokurudzira chinhu chandisina kana kuvhura, zvaisazove kutendeseka kwandiri. Kunyangwe iri yemahara kana yakabhadharwa haisi chinhu chinotara mhando yechigadzirwa uye nekudaro, hachisi chinhu chandinozotongwa nacho. Shuwiro yakanakisa!
Ndeapi Mapeji emahara Kupi?, Ndinoiwana muchitoro nemutengo we € 19,99 ...
Mhoro. Kwemakore akati wandei Mapeji, Numeri uye Keynote vakasununguka kana iwe ukatenga chero Apple chishandiso, izvi zvakaziviswa muKeynote, uye ndinotaura izvi kubva pane zvangu ruzivo. Pamwe hauna kutenga chero zvigadzirwa zveApple munguva pfupi yapfuura asi kana ukadaro, ita shuwa kuti upinde neiyo imwechete Apple ID uye ivo vanozoita sevanotora mahara sevamwe vashandisi.
Kugona chose Kana iwo maitiro eiri runyorwa rwekushandisa ndeyekuti iwe waashandisa iwo ini ndaizofunga kuchinja musoro wenyaya iyi blog positi. Ini ndinobvuma zvizere kuti mutengo hauratidze hunhu hwechigadzirwa, asi ichokwadi zvakare kuti kuyedza vashanu vavhoti hakubvumidze iwe kuti utaure zvakanaka nezvehunhu hwekushandisa kweiyo "nyora mu macOS" ecosystem.
Mhoro ViVVo. Ndiani akati ini ndaingoedza "vashanu"? Zvandataura ndezvekuti ini handina kuyedza LibreOffice uye nekudaro, ini handiisanganise kana kutaura nezvayo kana kupokana nazvo. Zvaitwa. Kune matani ekunyorera kunyora paMac uye zvechokwadi handina kuyedza zvachose ese, kwete ini, kwete iwe, kwete chero munhu. Pakutanga kwechinyorwa ini ndinoita kuti chinangwa changu chibudirire, asi zvinoita sekunge iwe unoteerera chete kuzita. Ini ndinoti: «nhasi ndiri kuzokuratidza sarudzo yeanogona kuve akanakisa mafomu ekunyora paMac yako. Uye ini ndoti" zvinogona "nekuti, shure kwezvose, chirongwa chakanakisa hachisi chimwe kunze kweicho chinonyanya kugona yekugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi wega wega kunyanya, uye kwete uya wandinonyanya kufarira. ».
Ini ndinofunga kuti ndisati ndapindura, uye pamusoro pezvose, ndisati ndatsoropodza nenzira yakaipa, zvakakosha kuti unyatsoverenga rugwaro rwose. Zvingangoitika, ini ndichazvidzokorora nekuzvitora zvakare: "chirongwa chakanakisa hachizi chimwe kunze kweicho chinokwanisa kugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi wega wega, uye kwete uya wandinonyanya kufarira."
Zvakare, kwaziso uye ndinokutendai zvikuru nekutishanyira.
Cecilia Camppos akadaro
Ndiri kunyora bhuku paMac uye ini ndoda chirongwa chinomaka iwo mapeji kwandiri uye kuona kumberi nekumashure mapeji, nezvimwewo uye izvo zvinosanganisira mukana wekuisanganisira mifananidzo.
Ita kuti zvive nyore kuzvibata, nekuti ini handinzwisise zvakawanda zvezvinhu izvi.
Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu.
Pindura Cecilia Camppos
Fernando Arriola Meneses akadaro
Ndakatenga iyo Scrivener rezinesi reMac makore maviri apfuura. Nhasi ndaedza kuvhura kuti ndinyore chimwe chinhu, zvinoitika kuti Mac mubatsiri anondiudza kuti haigone kuivhura nekuti mupi haana kuvandudza vhezheni, iyo yakagadzirirwa kushanda mumakumi matatu nemaviri uye Mac IOS, inoda kuti shanda mumakumi matanhatu ematanhatu; Ndakaenda kune saiti yemupi ndikakumbira iyo rezinesi nhamba. Appstore inoratidza kuti sezvo iri yakazvimiririra inopa, haina basa.
Pindura Fernando Arriola Meneses
Iyo yakanakisa kunyorera kudzoreredza mafaera muhuwandu inonzi Zvirinani Kutumidza zita gumi
Iyi iApple Park muvhidhiyo ichangoburwa inowanikwa